Amaphupho ngemali nobugwili – iAfrika
Amaphupho ngemali nobugwili
Asho ukuthini amaphupho ngemali nobugwili? Lokhu kuhlanganisa amabhange, ukuboleka/ukubolekisa, ithusi, imali ewuhlweze, amasheke, umqhele, isikweletu, ukuhola imali, igolide, ubucwebe, isiliva, ukuthenga, igugu namawalethi.
Tags Imali, Ukuceba
Amaphupho ngamakhadi okukweleta nokuthi amele ukuthini
Ukuphupha ngamakhadi esikweletu kumela ukukwazi kwakho ukuthola noma ukwenza okuthandayo empilweni ngaphandle kokusebenza kanzima noma ukukhathazeka kakhulu. Kukhombisa izinga lokukhululeka kwakho ngokuba namandla, amathuba noma ubumnandi. Ukusebenzisa ikhadi lesikweletu kusho ukuthi wena noma okuthize ngawe kukwazi ukwenza noma yini ukufeza injongo ngaphandle kwezinkinga. Ukuphupha ngabantu ababi benekhadi lesikweletu kungasho izinto ezingathandeki ngawe njengomuntu ezenza kube … Read more
Ukuphupha imali – ukuphupha inkece kuya ngokuthi enjani, uma kuyinkece engamaphepha lokho kusho ishobolo, kodwa ke uma kuyimali emhlophe kusho inhlanhla. Ukuphupha ngemali ewukheshi kusho amandla okufeza izinjongo ngenkululeko ephelele. Ungakhetha ukwenza okuthandayo. Inani lemali onayo ephusheni lisebenzisa izifundo zezinombolo ukuchaza okukhethayo noma ukuzizwa sengathi unamandla. Ukuthenga ngemali ewukheshi kumela ukusebenzisa amandla noma amasu ukufeza … Read more
Kusho ukuthini ukuphupha ngesiliva?
Umbala wesiliva emaphusheni umele ukuzizwela ngenhliziyo, inhlanhla, noma izenzakalo eziziqondanelayo. Ukuzizwela ngenhliziyo noma ukuqondiswa ngaphakathi kukusiza ukhethe lokho okuzokuholela kulokho okudingayo empilweni, ukuqondisisa kabusha, amandla amasha noma inkululeko entsha etholakala ngokuvela ngethuba. Okubi wukuthi isiliva lingaba uphawu lokuthi unebhadi noma uzwa sengathi akukho okukusebenzelayo. Ukuphupha ngezinto zesiliva kumela ukuzizwela ngenhliziyo noma inhlanhla ehambisana nanoma yini … Read more
Kusho ukuthini ukuphupha ngegolide kuwe?
Ukuphupha ngegolide kumela imizwa yokubaluleka kwento esempilweni yakho. Imizwa yokuceba noma ukujabulela ukuba nento enokubaluleka ibe kuwe wedwa. Amathuba anokubaluleka atholaka sonke isikhathi. Ukuzizwa ulondekile ezingeni lakho lamandla noma inkululeko yokwenza umathanda. Isenzakalo noma inzuzo eqinisekisiwe. Umuzwa wokulondeka ngento ebalulekilekuwe.
Igolide lingamela nenhlanhla enhle, ingcebo, ukwelapheka, ukukhanyiseka, injabulo nempumelelo.
Noma, igolide ephusheni lingemela imizwa yokuqiniseka ngamandla. Cabanga umusho othi “Okuhle njengegolide”. Ukuzethemba okuphelele ngokuthi wena noma omunye umuntu ungumanqoba.
Okubi ukuthi ukuphupha ngegolide kungamela imizwa yenkohlakalo, ukwenza ngokweqile noma umuntu owonakele ngezinto eziningi. Kungakhombisa nemizwa yakho engeyinhle njengokukhungatheka noma umona ngenjabulo yomunye umuntu. Izitha ezinamandla alondekile.
Ukuphupha ngokuthola igolide kumela imizwa ngokuthola into ebalulekile ngawe noma esempilweni yakho.
Amaphupho mayelana namaBhange nokuthi asho ukuthini
Amaphupho mayelana namaBhange Ukuphupha ngebhange kumela amasu noma amandla owaqukethe ongawasebenzisa noma yinini. Amathalente, amakhono, ukusekelwa ngokwezimali, ukusekelwa ngokomzwelo, noma izinto ezikunikeza umuzwa wokulondeka. Yilokhu oyamela kukho ukuzigcina ulondekile noma uphumelela. Ibhange lingakhombisa futhi ukuthi ubudlelwane bakho nabanye noma ukusebenzisana kwakho nabantu kunamandla kangakanani futhi kulunge kangakanani. Amandla, amasu noma abantu obasebenzisayo ukufeza izinjongo zakho. … Read more
Tags Amakhono, Amathalente
Ukuphupha ngemali Ukuphupha ngemali kumela amandla okufinyelela izinhloso noma izinjongo zakho. Izinjongo zingaba ezithinta ingqondo, okungokomzwelo, noma ukufinyelela lapho okwenzeka khona okuthandayo empilweni uma usuphapheme. Ukwazi ukucabanga, ukuzwa noma ukwenza okuthandayo empilweni. Imali ikhombisa ukuthi wena noma okuthize ngobuwena bakho bunamandla amangakanani. Kuwukuzazi. Okuhle ukuthi imali imela okungenzeka, amandla namathuba. Iseluleko esiwusizo. Ukuziziwa ukwazi ukwenza … Read more
Uma uphupha ukuthi akunalutho kwiwalethi yakho yingoba osebenza nabo kungenzeka ukuthi bazama ukukukhohlisa. Uma uphupha ukuthi ubona iwalethi yakho igcwele imali uzothola imali maduzane. Uma ulahlekelwa yiwalethi yakho awusezoxhumana nomunye wabangani bakho noma omunye wezihlobo zakho.
Uma uphupha ukuthi uthole igugu eligqitshiwe qaphela ngoba kuwuphawu lebhadi.
Uma uphupha ubona isiliva, imali eyisiliva, noma izinto ezenziwe ngesiliva; lokho kuwuphawu oluhle. Kusho ukuthi uzoba nenhlanhla futhi ube nomshado onenjabulo uma kunguwena owemukela izinto zesiliva. Uma omunye umuntu ethatha kuwe izinto zesiliva, lokho kusho ukuthi uzoba nebhadi kumbe nomshado ongenayo injabulo. ▪️Kusho ukuthini ukuphupha ngesiliva?
Uma uphupha ukuthi uyothenga lapho okunendali khona kusho ukuthi uzokhuthuzwa.
Uma uphupha ukuthi unenhlanhla futhi uyisigwili kusho ukuthi maduzane nje uzoshiyelwa into enhle ngefa.
Uma uphupha ukuthi ubona igolide ngemvamisa kuwuphawu olubi futhi lukhomba ubunzima ekusaseni lakho. Uma uphupha isithandwa negolide kubi kakhulu futhi kusho ukuthi nizoba nebhadi ndawonye. Qaphela uma uphupha lokhu ikakhulukazi uma unomsebenzi.
Amaphupho ngokuhola imali
Uma uphupha ukuthi uhola imali eningi kusho inkathazo ikakhulukazi uma ungusomabhizinisi. Kungenzeka kube khona okulahlekelwayo maduzane. ▪️Amaphupho ngesikweletu.
Uma uphupha ukuthi unenkinga yesikweletu kusho ukuthi uzoba yisigwili. ▪️Amaphupho ngokuhola imali. ▪️Amaphupho ngamakhadi okukweleta. Amaphupho ngodaka.
Amaphupho ngokugqoka umqhele
Uma uphupha ukuthi ugqoke umqhele kusho ukuthi abantu bazokuthanda bakuhloniphe futhi izinto ezinhle zizokwenzeka maduzane.
Uma uphupha ukuthi ubhala isheke noma ukhipha imali yesheke kusho ukuthi uzothola imali maduzane kodwa yisixwayiso ukuthi uyisebenzise ngokucophelela.
Amaphupho ngemali ewuhlweza yethusi
Uma uphupha ukuthi unikezwe noma ucosha imali ewuhlweza yethusi kusho ukuthi kunobunzima obuzayo empilweni yakho maduzane. Isho ukuthini imali emaphusheni akho?
Tags Imali, Ithusi
Uma uphupha ukuthi ubona ithusi umuntu omthandayo uthandana nomunye umuntu noma uqamba amanga kuwe.